एशेज श्रृंखलाः इंग्ल्याण्डको टिम घोषणा, को–कोले पाए मौका? - Everest Dainik - News from Nepal
एशेज श्रृंखलाः इंग्ल्याण्डको टिम घोषणा, को–कोले पाए मौका?
काठमाडौं, साउन १५ अष्ट्रेलिया विरुद्धको एशेज श्रृंखलाको पहिलो टेस्ट खेलका लागि इंग्ल्याण्डले १४ सदस्यीय टिम घोषणा गरिएको छ । १४ भित्र हालै सम्पन्न वान डे विश्वकपमा उपाधि दिलाउन अहम् भूमिका खेलेका जोफ्रा आर्चर भने हटाउन असफल भएका छन् ।
अष्ट्रेलियासँगको पहिलो खेलमा डेब्यू गर्ने आँकलन गरिए पनि अन्तिममा आएर आर्चर १४ सदस्यीय टिम बाहिर रहेका हुन् । एशेज श्रृंखला बुधबारबाट सुरु हुँदैछ । पहिलो एशेज टेस्टका लागि इंग्ल्याण्डले घोषणा गरेको टोलीमा को–कोले पाए मौका? हेर्नुस्–
इंग्ल्याण्डकाे टिमः रोरी बर्न्स, जसन रोय, जो रूट (कप्तान), जो डेन्ली, जस बटलर, बेन स्टोक्स, जनी बेयरस्टो, मोईन अली, क्रिस वोक्स, स्टुअर्ट ब्राड र जेम्स एण्डरसन ।
ट्याग्स: इंग्ल्याण्ड भर्सेस अष्ट्रेलिया, एशेज श्रृंखला